ဓါတ်မတည့်ဖြစ်လွယ်တဲ့ လေဒီလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည် ဘယ်လိုရွေးမလဲ - Page 8 of 22 - Hello Sayarwon
ဓါတ်မတည့်ဖြစ်လွယ်တဲ့ လေဒီလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည် ဘယ်လိုရွေးမလဲ
ဓါတ်မတည့်ြဖစ်လွယ်တာကတော်တော်လေးတော့စိတ်ပျက်စရာနော်။ ဓါတ်မတည့်တာက ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့နေရာအနှံ့မှာဖြစ်နိုင်တာပါနော်။တော်တော်များများထင်ထားတာက ဓါတ်မတည့်မှုက မျက်နှာနဲ့ခြေလက်တို့လောက်မှာပဲ အဖြစ်များမယ်လို့ပေါ့။ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဓါတ်မတည့်ဖြစ်တာက အချို့လေဒီလေးတွေမှာဆိုရင် မိန်းမကိုယ်မှာတောင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ လူကြားထဲမှာနေရခက်သလို ကိုယ့်ကိကိုယ် ယုံကြည်မှုလည်းကျသွားပါတယ်နော်။လေဒီလေးမှာ ဒီပြဿနာလေးကြုံနေရတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးက သင့်အတွက်ပါနော်။
မြင်သာတဲ့နေရာမှာ ဓါတ်မတည့်ဖြစ်တာကတောင်နေရခက်သေးရင် မမြင်သင့်မမြင်အပ်တဲ့နေရာမှာ ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်တာက ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးရွားလိုက်မလဲနော်။နေ့စဉ်မှာ ဒီလိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာက သစ္စာရှိရှိ အရိပ်လိုတွယ်ကပ်နေပြီဆိုရင်တော့နေ့စဉ်အလုပ်တွေကိုသေသေချာချာလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ လူအများကြားမှာ ယုံကြည်မှုပြည့်ဝတဲ့လေဒီလေးဖြစ်ဖို့ အကြီးအကျယ်အခက်တွေ့ပြီပေါ့။ ဒီပြဿနာကမွေးထားလို့မကောင်းဘူးနော်။ မြန်မြန်ရှင်းနိုင်မှတော်ကာကျမှာပါ။
ဒါဆိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ပြဿနာရှိရင်အဖြေရှိတယ်လေ။ အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်သုံးမှာပေါ့။ အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်က သုံးလို့ရပါ့မလား အဆင်ပြေပါမလားလို့တွေးနေလား။ ဆပ်ပြာသုံးလို့ရောမရဘူးလားပေါ့။ ဆပ်ပြာကိုတော့ မိန်းမကိုယ်လေးက နိုးပါတဲ့နော်။ ဆပ်ပြာသုံးရင် မိန်းမကိုယ်လေးအတွက်ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကပိုများပါတယ်နော်။ ဒါဆိုရွေးစရာကျန်တာက အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်ပေါ့။ဒီလိုဆိုတာနဲ့တွေ့ရာအမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်ကို သုံးလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးလေ။ ဓါတ်မတည့်တတ်သူတွေက အခြားသူတွေထက်ပိုသတိထားရမယ်မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ဓါတ်မတည့်တတ်တဲ့လေဒီလေးတို့အတွက် အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည် ဘယ်လိုရွေးမလဲပြောပြမယ်နော်။
ဓါတ်မတည့်တဲ့လေဒီလေးတို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်
ဓါတ်မတည့်တတ်တဲ့လေဒီလေးတို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့်အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်ဆိုတာ ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရပါမယ်နော်။
အနံ့ ကင်းရပါမယ်– သဘာဝ ရနံ့ဖြစ်ရမယ်။ အနံ့မပြင်းရဘူး၊ အနံ့မစူးရဘူး။ အနံ့ပြင်းရင်တော့ ဓါတုပစ္စည်းတွေကို သုံးထားပြီဆိုတာ သိဖို့လိုပြီလေ။
အရောင်ဖျော့ရပါမယ်– ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အရောင်အဆင်းကင်းရပါမယ်။ အရောင်တောက်လေလေ ဓါတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်မှုများလေလေဖြစ်တာကြောင့် မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည်ရွေးတဲ့အခါ အရောင်ဖျော့တာကိုရွေးပါ။
သဘာဝဆန်တာကိုရွေးချယ်ပါ– သဘာဝဆန်တာတွေဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်နိုင်ခြေ ကိုနည်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်ရွေးချယ်တဲ့အခါ သဘာဝပစ္စည်းတွေကို အခြေခံပြီးထုတ်ထားတာမျိုးကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
pH ပမာဏသင့်တင့်မျှတတာကိုရွေးချယ်ပေးပါ– pH ပမာဏကများလည်း မကောင်းသလို နည်းလွန်းရင်လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါကြောင့် အစိုဓါတ်ထိန်းပေးပြီး ဘက်တီးရီးယားပေါက်ဖွားမှုတွေကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် pH ပမာဏ သင့်တင့်မျှတတဲ့ အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူပေးပါ။
Prebiotics (အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားအာဟာရ) ပါဝင်တာကိုရွေးချယ်ပါ– ဘက်တီးရီးယားဆိုတိုင်း မကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး ။ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေ ရှိသလို အကျိုးမပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေလည်းရှိပါတယ်။ အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားလေးတွေက မိန်းမကိုယ်လေးသန့်စင်ကျန်းမာစေဖို့ ကိုယ်ရံတော်လေးတွေဆိုတော့မေ့ထားလို့ ဘယ်ဖြစ်လိမ့်မလဲ။
Lactic acid ပါတာကိုရွေးချယ်ပေးပါ –Latic acid က သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိသလို pH ပမာဏကိုလည်း ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားပေါက်ဖွားမှုကို ထိန်းညှိပေးပြီးရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကနေလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်ဝယ်ယူ တဲ့အခါ ပါဝင်ပစ္စည်းထဲမှာ Latic acid ပါဝင်တာကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ သတိထားရမှာက ဓါတ်မတည့်ဖြစ်လွယ်တယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်ဝယ်ယူတဲ့အခါ အစိုဓါတ်ထိန်းပေးတဲ့အမျိုးအစားမျိုးဖြစ်စေဖို့လည်းသတိထားရပါမယ်။ အရင်က အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာသိပ်မရှိခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ဈေးကွက်ထဲမှာတော်တော်များများရှိနေပါတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် များတယ်ဆိုတိုင်း အလျဉ်းသင့်သလိုဝယ်လိုက်လို့ကတော့ အဆင်ပြေဖို့က မလွယ်လှပါဘူး။ ဒီတော့ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ဖို့အတွက် တာဝန်အရှိဆုံးကတော့ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။
ဒီလိုပြောလို့ ဘာရွေးရမလဲမသိဘူး။ခေါင်းတွေနောက်လာပြီလို့တော့ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်ရွေးချယ်နည်းလေးအကြောင်းပြောပြမှာပေါ့။ Sharing is caring ဟုတ်။ အမျိုသမီးသန့်စင်ဆေးရည်ကရွေးတဲ့အခါ မိန်းမကိုယ်ကိုခြောက်သွေ့မှုမရှိအောင် အစိုဓါတ်ထိန်းပေးပြီး pH ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ဖို့လိုသလို အနံ့အသက်ဆိုးဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးပြီး မိန်းမကိုယ်ယားယံတာ၊ အနံ့အသက်ဆိုးဖြစ်တာ နဲ့ အဖြူဆင်းတာတွေကိုလျော့ပါးသက်သာစေဖို့လည်း လိုပါမယ်။ လေဒီတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံချင်းက မတူညီကြဘူးဆိုတော့လိုအပ်ချက်ချင်းကလည်း မတူညီနိုင်ဘူးပေါ့။ ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့လိုက်အောင်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့လိုပါမယ်။ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီအောင်သုံးတတ်မှတော့ ဘာများလိုဦးမလဲနော်။
ကဲ …. စိတ်ညစ်မနေနဲ့တော့နော်။ အခုပြောခဲ့တာလေးတွေကို သတိထားလိုက်ပေါ့။ စိတ်ညစ်စရာအခြေအနေကနေ ကင်းလွတ်ခွင့်ရလို့ ရဲရင့်ထက်မြက်တဲ့လေဒီလေးအဖြစ်နေ့ရက်တိုင်းကို တူတူဖြတ်သန်းရအောင်လား……………….. Are you ready ladies?
5 expert tips for choosing the right vaginal washhttps://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/expert-tips-for-choosing-the-right-vaginal-wash-b0316/ Accessed Date 8 April 2019
Vulvar skin care guidelineshttps://uihc.org/health-topics/vulvar-skin-care-guidelines Accessed Date 8 April 2019